ठूलो शहर को पारिस्थितिकी हाम्रो स्वास्थ्य मा मात्र होइन तर पनि उचित सेक्स संग विशेष चिन्तित छ जो बाहिरी, मा नकारात्मक प्रभाव छ। यो कारक अलग्गै, छाला समस्या बंशाणु, गरीब आहार र तनाव कारण हुन सक्छ। सहायता आउँछ सफाई अनुहार मार्गदर्शन।
बढेको pores, pimples को र comedones, खुलस्त, एक अप्रिय चित्र सिर्जना गर्नुहोस्। सहमत, समस्या छाला घृणा को पनि एक भावना अरूलाई मा, कम आत्म-सम्मान यो havingness उल्लेख छैन हुन सक्छ।
खुसीको कुरा, लगभग हरेक ब्यूटी पार्लर अनुहार को व्यावसायिक सफाई को लागि उपलब्ध छ। गहिरो सफाई प्रभावकारी blackheads र मुखासे हटाउँदछ, साथै मृत छाला कणहरु exfoliates।
समस्या र तेल छाला को मालिकहरूले अनुहार को यांत्रिक सफाई गर्न सिफारिस गरिएको छ। एकदम सरल अनुमान गर्न के यो छ: विजार्ड स्वयं सबै समस्या क्षेत्रमा सम्हाल्छ। निस्सन्देह, प्रक्रिया केही असुविधा ल्याउन सक्छ, तर छाला को तयारी को सबै चरणमा यदि यो न्यूनतम हुनेछ।
को विजार्ड छनौट
धेरै बालिका र महिला प्रक्रिया निर्णय गर्न सजिलो छैन, तर यो एक योग्य विशेषज्ञ पाउन पनि गाह्रो छ। व्यक्ति सफाई अघि के हेर्न?
सरसफाइको स्तर अनुपालन।
यी अन्तिम परिणाम असर दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। अनुभवहीन ब्यूटिशियन, उदाहरणका लागि, पूर्ण सक्दैन को pores सफा , वा घाउ मा एक संक्रमण ल्याउन।
कम लागत र दक्षता - यी अनुहार को यांत्रिक सफाई भेद कि मुख्य विशेषताहरु छन्। पुस्तिका मा विशेष हेरफेर अघि र पछि फोटो देखिने परिणाम प्रतिज्ञा। मुख्य कुरा, तपाईं प्रक्रिया पछि आफ्नो अनुहार सही हेर्न जब नआत्तिनुहोस् छ - राता र सुनिंनु को केही घण्टा गायब।
हामी पहिले नै उल्लेख गरेको छ रूपमा, सफाई को कोमल उचित तयारी, साथै व्यक्तिगत विशेषताहरु निर्भर गर्दछ। पहिलो कदम-अप हटाउन र pores प्रकट छ। कस्मेटिक उत्पादनहरु प्रयोग निषेध गर्न, वा विशेष सफाई मास्क लागू - विशिष्ट अवस्था आधारमा, मास्टर के निर्णय गर्छ। धेरै तरिकामा pores प्रकट गर्न:
termorazogrevayuschego जेल मार्फत;
Vaporizer (भाप जेट प्रक्रिया) मार्फत।
विकसित अनुहार, मा जहाजहरु अस्थमा र सुक्खा पातलो छाला वाष्पीकरण लागि contraindications छन्।
प्रकटीकरण सम्म निर्जलीकरण प्रक्रिया रोकियो र थप शुद्धीकरण सुविधा।
त्यसैले, छाला वसामय प्लग को एक मृदुकरण परिणाम उमालेको, त्यसैले अनिवार्य उपचार लोशन पछि। यो विजार्ड त्यसपछि उपकरण प्रयोग गरेर, सफाई pores सीधा आय:
Uno चम्चा। सानो strainer - एक प्वाल र अन्य संग छडी स्थित चम्चा एक अन्त मा। चम्चा एकल मुखासे हटाउन प्रयोग गरिएको छ। blackheads र comedones सामना गर्न मदत गर्न Strainer।
पाश Vidal। सतहमा गहिरो comedones र blackheads सामना गर्न उपयुक्त।
सुई Vidal। यो सानो सेतो pimples को ( "वेन"), साथै गहिरो-विराजमान मुखासे को हटाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। Vidal सुई गर्न, र प्रक्रिया पछि, साना चोटपटक देखिन सक्छ संवेदनशील सुक्खा र संवेदनशील छाला को मालिक।
सबै उपकरण चिकित्सा इस्पात को गर्नुपर्छ। को घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने उपचार प्रयोग गरेर अघि सुनिंनु रोक्न आवश्यक छ। यो त साधन को कुनै पनि उपयुक्त छैन भनेर हुन्छ - यो मामला मा मास्टर स्वयं pores देखि एक गोप्य हटाउँदछ।
अपवाद बिना, सबै beauticians प्रभावकारी अनुहार सफाई रूपमा लामो छाला अझै पनि न्यानो छ रूपमा रहन्छ भनेर थाह छ। बारेमा बीस मिनेट पछि, pores बन्द गर्न सुरु, र सफाई एकदम पीडादायी हुन्छ।
को "काम स्कोप" ठूलो छ भने, प्रक्रिया, धेरै चरणमा बाहिर छ सफाई अनुहार लागि निर्वात उपकरण प्रयोग गरेर। छाला संग सम्पर्क मा एक सानो गिलास ट्यूब जो सबै वसामय प्लग बाहिर स्थित छन् दबाव सिर्जना गर्छ। यो संयोजन अनुहार को सफाई राम्रो परिणाम हासिल गर्न अनुमति दिन्छ।
पछिल्लो चरण मा, उपचार क्षेत्रमा disinfected हुनुपर्छ र soothe र साँघुरो pores। अक्सर, को विजार्ड एक लोशन वा टनिक, त्यसपछि एक विशेष मास्क, उदाहरणका लागि, चिकित्सकीय माटो प्रयोग गर्दछ। यसलाई पूर्ण, सुनिंनु हटाउँदछ pores कम र अतिरिक्त sebum अवशोषित। कहिलेकाहीं रक्त प्रोत्साहित गर्न मालिश खर्च।
"सफाई व्यक्ति", जसको मूल्य को प्रक्रिया - वरिपरि 2000-2500 rubles, सास फेर्न गर्न छाला दिन्छ र एकदम pores कम गर्छ। यसबाहेक, comedones र pimples को को पूर्ण हटाउने छ।
बालिका र महिला को "जादुई" परिवर्तन पछि थाहा तपाईं अनुहार को सफाई कसरी अक्सर गर्न सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ? यस विषयमा आदेश लाभ प्रक्रिया गर्न सल्लाह गर्न इच्छुक छन् खातामा छाला को अवस्था लिइरहेको बिना पनि महिनाको दुई पटक, वृद्धि गर्न विभिन्न राय, र केही cosmetologists छन्। निस्सन्देह, मास्टर यस्तो भरोसा छैन यो मूल्य पनि बारम्बार हटाउने sebum यसको उत्पादन मा वृद्धि गर्न जान्छ किनभने छ।
अक्सर तपाईं विशेषज्ञहरु निम्न सिफारिसहरू सुन्न सक्नुहुन्छ:
कालो स्पट धेरै संग तेल छाला एक पटक हरेक तीन महिना बारेमा साफ गर्न सकिन्छ;
संयुक्त प्रकार - एक पटक हरेक महिना वा एक वर्ष।
एक अनुभवी मास्टर को परिणाम हेर्न सधैं राम्रो - छैन एक अपवाद र अनुहार को यांत्रिक सफाई छ। फोटो "अघि र पछि", स्पष्ट प्रक्रिया को प्रभावकारिता देखाउँछ, तल पोस्ट। तर आधारभूत नियमहरू बारे मा भूल छैन:
12 निषेध धुने पानी घण्टा ब्यूटिशियन भ्रमण पछि;
एक हप्ता तर्फ रक्सी युक्त, अनुहार लागि पैसा सेट;
प्रत्यक्ष सूर्यका वा टेनिंग जोगिन प्रयास;
सानो sores स्पर्श गर्न टाढा राम्रो घाइते ठाउँमा देखा पर्न सक्छन्।
मा प्रक्रिया पछि पहिलो दिन, खुजली चिन्तित भएको बालिका र महिला केही - यो छाला को एक सामान्य प्रतिक्रिया साथै रातो स्थलहरू छ। केही दिन पछि peeling देखिन सक्छ, र महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको पूर्वसन्ध्या कहिल्यै अनुहार सफाई आयोजित यति रिकभरी, कम्तिमा एक हप्ता हुनेछ।
यो सम्झँदा लायक छ कि अनुहार को यांत्रिक सफाई - परिवर्तन कि वा छाला, वा संक्रमण को मामला मा यो क्षति एउटा एकदम गम्भीर हस्तक्षेप। तर, हो कि यो प्रक्रिया उपयुक्त छैन रोगहरु को एक नम्बर हो:
अनुहार को यांत्रिक सफाई संवेदनशील र सुख्खा छाला को मालिकहरूलाई उपयुक्त, साथै सुनिंनु र एलर्जी प्रतिक्रिया झुकाउ छैन। साथै, ब्यूटिशियन गर्न यात्रा गर्न महिनावारी समयमा योजना।
सैलून उपचार उपलब्ध सबै निष्पक्ष सेक्स छैन। हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ कसरी घर मा आफ्नो अनुहार सफा गर्न। वास्तवमा यो त गाह्रो छ, तर माथि कदम अनुपालन मा छ।
एक भाप स्नान बनाउन pores खोल्न। यो गर्न, तातो पानी को एक कचौरा भन्दा आफ्नो अनुहार झुकाव र तौलिया टाउको संग कवर। केही मिनेट पछि बिस्तारै छाला ऊतक PAT, र त्यसपछि 10-15 मिनेट स्टीम जारी। बरु सादा पानी, तपाईं chamomile वा अन्य उपयुक्त जडीबुटी (सैलंडन र कैलेंडुला) को एक decoction तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
सफाई को लागि उपकरण अब ध्यान दिएर, किन्न यसरी उत्पादन गुणस्तर ध्यान र पढ्न निर्देशनहरू एकदम सजिलो छ।
सबै manipulations सफा हात र राम्ररी सफा छाला संग बाहिर पर्छ भनेर सम्झना। अनुहार खुला sores, pimples को वा अन्य अपरिपक्व सुनिंनु छ भने, तपाईं प्रक्रिया छुट्याइएको निश्चित गर्नुहोस्।
अनुहार को यांत्रिक सफाई (यो के हो, तिनीहरूले बालिका र महिला धेरै थाहा छ, तर एक cosmetologist को सेवाहरू प्रयोग मात्र चरम अवस्थामा छ) - प्रक्रिया छ "हृदयको बेहोश लागि होइन।" यहाँ सबैभन्दा साहसी महिलाहरु समीक्षाएँ वर्णन गर्न कसरी। प्रभाव साँच्चै सजिलै देखिने छ, तर यसको पूर्ण प्रकटीकरण लागि एक हप्ताको बारेमा प्रतिक्षा गर्नुपर्छ।
फेयर सेक्स को केही तत्काल परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, र जब तुरुन्तै सानो sores आफ्नो रातो अनुहार हेर्न सफाई र सुनिंनु (अझै पनि यहाँ थप्न दुखाइ) पछि, त्यसपछि हरर प्रतिज्ञा मा "जस्मानी सजा" मा जाने छैन।
विशेष ध्यान यांत्रिक सफाई पछि छाला हेरविचार, प्राप्त प्रभाव लम्ब्याउनु मदत गर्नेछ जसको लागि दिइएको छ। प्रक्रिया को प्रभाव समाप्त गर्न तीन उपकरण नोट:
blemishes र राता हटाउन घ्यु कुमारी जेल।
नीलो वा हरियो माटो। सफाई पछि मुखासे सुनिंनु हो। माटो को मास्क - यो घृणित pimples को हटाउने एउटा सिद्ध तरिका हो।
सेतो माटो + खनिज पानी। सानो घाउ निको सेतो माटोले मास्क मदत गर्नेछ अघि बढाउने। बाहिर जानुअघि, एक डट salicylic मलम लागू हुन्छ।
तीन दिनको लागि, तापमान र मादक पेय को खपत मा अचानक परिवर्तन जोगिन त छाला, पुन: निर्माण मा हाम्रो सहयोग आवश्यक छ। अधिकतम hydration र पिउने शासन छिटो प्राकृतिक सुरक्षा तह फिर्ता हुनेछ।
परिणाम सुरक्षित गर्न, तपाईं फल एसिड को आधार मा peeling छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। विशेषज्ञहरु एक सूथिंग मास्क संग संयुक्त दुई पटक प्रक्रिया एक हप्ता, पूरा गर्न सल्लाह।
कुशल कारीगरों कौशलतासाथ संयोजन सैलून उपचार - त्यसैले त्यहाँ एक संयुक्त अनुहार सफाई थियो। माथिको-वर्णन यांत्रिक सफाई र अल्ट्रासोनिक सफाई यो संयोजन।
VHF समयमा उपचार बिस्तारै छाला असर गर्छ। अल्ट्रासाउंड मुखासे लड्न मद्दत गर्छ र noninflamed "रन" को pores।
सफाई अनुहार लागि मुख्य साधन - उजागर "कालो स्थलहरू" हटाउँदछ जो, र त्यहाँ अशुद्धियों एक नाजुक सफाई छ स्क्रबर, लाइटर स्थलहरू, र छाला रंग लगायो छ। प्रक्रिया समयमा elastin र कोलैजेन को उत्पादन को बढावा।
अल्ट्रासोनिक सफाई निम्न contraindications छ:
गर्भावस्था को र lactation समयमा दोस्रो आधा;
को हृदय प्रणाली को रोगहरु;
हाल maxillofacial सर्जरी वा लिफ्ट सुन सूत्रहरू प्रयोग गरेर।
को सैलून वा घरमा?
मूल्य लागि अल्ट्रासोनिक सफाई को उचित सेक्स को धेरै प्रतिनिधिहरु एकदम सुलभ छ। 2000 rubles र माथि देखि - सेवा र प्रक्रिया को कस्मेटिक्स लागत को प्रयोग को दायरा आधारमा।
यदि तपाईं राम्रो ब्यूटिशियन वा सीमित समय फेला परेन, तपाईंलाई सधैं एक अल्ट्रासोनिक उपकरण किन्न र कस्तो सैलून अनुहार सफाई भूल गर्न सक्नुहुन्छ। पोर्टेबल स्क्रबर मूल्य - बारे 4000 rubles।
उपचार पछि, छाला toned र उज्ज्वल देखिन्छ, तर अल्ट्रासोनिक सफाई पनि टाढा छैन लगे प्राप्त छ। एक पटक सफाई बनाउन र त्यसपछि परिणाम हासिल कसरी लामो पर्याप्त लागि हेर्नुहोस्। कुनै पनि मामला मा, छाला र अन्य नकारात्मक परिणाम को overdrying सक्छ, अधिक प्राय एक पटक हरेक दस दिन भन्दा ब्यूटिशियन गर्न पदयात्रा।
आधुनिक cosmetology थप बख्शते विधिहरू, भन्दा अनुहार को यांत्रिक सफाई (यो के हो, र हामी समीक्षा को सुरुमा उल्लेख गरिएको contraindications को चरणमा) थाह छ। सबैभन्दा लोकप्रिय सेवाहरूको एक छ अनुहार, को atraumatic सफाई जसको लागि मात्र उपकरण को एक निश्चित सेट गर्न आवश्यक छ।
प्रक्रिया को मुख्य चरणमा:
बनाउन-अप र सतह अशुद्धताओं हटाउँदै।
विशेष संरचना संग comedones मृदुकरण।
Peeling। फल एसिड को मद्दतले राता र peeling छोड्छ कि पीडारहित exfoliation लगे छ।
खोल्दै दिन। परम्परागत गश्त सट्टा व्यक्ति विशेष मिश्रण मा राखे। यो उपकरण comedones र sebum भंग गर्न मद्दत गर्छ। त्यसपछि जो संक्रमण रोक्छ, लोशन प्रक्रिया छ।
मास्क। यो pores साँघुरो उद्देश्य। तपाईंको छाला को प्रकार अनुसार व्यक्तिगत ब्यूटिशियन चयन।
दाह राहत गर्न जेल। सेल पुनर्जनन accelerates र छाला soothes।
रिकभरी। सफाई पछि प्राकृतिक सुरक्षा वस्तुतः गैर-अस्तित्वहीन, त्यसैले एउटा अस्थायी "ढाल" एक पोसिलो क्रीम छ।
अन्तिम कर्ड। जुत्ता विशेष पाउडर वा सनस्क्रीन को आवेदन Atraumatic समाप्त हुन्छ।
खुला घाउ, बल्न;
एक पूर्ण सफा अनुहार कसरी बनाउने, पवित्र भूमि विशेषज्ञहरु थाहा छ। एक चौथाई शताब्दीको लागि, Israeli कस्मेटिक्स निर्माताहरु उद्योग मा अग्रणी स्थिति लिन व्यवस्थित। सुन्दर महिला ग्राहकहरु मात्र उच्च गुणवत्ता उत्पादन, तर पनि उपचारको लागि लाइनको एउटा अविश्वसनीय विविधता मूल्यांकन र कुनै पनि छाला को प्रकार हेरचाह।
पवित्र भूमि सफाई जटिल atraumatic छाला टोन सुधार र evens र बाहिर झुर्रियाँ smooths र visibly pores कम गर्छ। को रचनाहरूको को दिल मा बिरूवा मूल को कच्चा माल छ, त्यसैले एक एलर्जी प्रतिक्रिया वा जलन को जोखिम कम छ। को Israeli निर्माता पनि समस्याग्रस्त र संवेदनशील छाला को लागि उपयुक्त बाट कोष।
उपचार मूल्य - बारे 4000 rubles।
अर्को क्रान्तिकारी प्रक्रिया - अनुहार को सफाई लेजर। एक विशेष उपकरण प्रयोग गरेर लेजर बीम को epidermis, तापमान र मृत कक्षहरू हटाइएको माटो को प्रभाव कहाँ अन्तर्गत को बीचमा वा माथिल्लो पत्रहरु मा प्रवेश गर्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार लेजर सफाई धेरै लाभ छ:
कारण सम्पर्क को कमी गर्न संक्रमण को जोखिम निर्मूल;
छाला को तीव्र रिकभरी;
छाला बोसो को उन्मूलन।
लेजर सफाई dilated pores, असमान भू-भाग, उमेर स्थलहरू र झुर्रियाँ लागि संकेत छ।
उपचार (30-40 मिनेट) को समयमा, लेजर प्रभावकारी त्यसपछि पूर्ण नवीकरण प्रक्रिया चल्छ जो साइटमा छाला को माथिल्लो तह हटाइयो। साथै, त्यहाँ कोलैजेन को उत्तेजना, को लोच र दृढता लागि जिम्मेवार छ।
प्रक्रिया कडा सुक्खा र संवेदनशील छाला को मालिक सल्लाह छ। साथै, त्यहाँ अन्य contraindications हो:
गर्भावस्था र lactation;
एक तीव्र फारममा संक्रामक र भडकाऊ रोगहरु।
अनुहार (यांत्रिक, निर्वात, वा अल्ट्रासाउंड) को कुनै पनि सफाई अनुहार मा चिह्न छोड्छ, तर लेजर जोखिम को नतिजा थप दृश्यात्मक हुनेछ। छाला को बाँकी तह - जीवाणु संक्रमण लागि सही प्रजनन जमीन र त्यसैले विशेष हेरविचार आवश्यक छ।
उपचार पछि दुई हप्ता भित्र जग वा पाउडर प्रयोग, साथै अतिरिक्त peelings सम्बन्धी प्रतिबन्धहरू। तपाईं ट्याप पानी संग धुन र रक्सी समावेश भएको अनुहार tonics हटाउन हुँदैन।
चयन को जटिलता
तपाईं अझै पनि राम्रो सफाई व्यक्ति कस्तो बारेमा सोच छ भने, यो दृढता ब्यूटिशियन बारी गर्न सल्लाह दिइन्छ। छाला को प्रकार र हालको समस्या आधारमा, विशेषज्ञ आफ्नो सिफारिसहरू दिन हुनेछ।
साथै, पीडादायी प्रक्रिया विचार गर्नुहोस्। केही महिला सजिलै यांत्रिक सफाई सहनु र अल्ट्रासोनिक अन्य "बल परीक्षण" को लागि पनि सत्य हो।
तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सल्लाह: को भित्र आवश्यक छ देखि समस्या समाधान गर्न। कि अनुहार (blackheads, मुखासे) मा कारण आन्तरिक अङ्गहरू गर्न प्रायजसो, देखिन्छ सबै काम। यसैले अनुहार सफा गर्न ठीक राम्रो गर्न शरीर मा समस्या, र त्यसपछि।
छाला हेरविचार लागि silkworms को cocoons कसरी? रेसमको cocoons सामना: समीक्षा
गृह ब्यूटी सैलून: सक्रिय चारकोलसँग कालो बिट्सबाट मास्क
शुक्लपक्ष "गहिरो बिकनी": को पद्धति को विवरण
उमेर स्थलहरू उन्मुक्ति कसरी: रहस्य प्रकट
प्रेमको सुरुमा मान्छे सोध्न के
बाम "गोल्ड स्टार": संरचना, गुण र उपयोग निर्देशन
पर्यटन मा जब - यो छ रूपमा।